नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): निभ्नै सकेनन् मुटुका ज्वाला
निभ्नै सकेनन् मुटुका ज्वाला
तिम्रा झूठा कसमले !
पूजेको ढुंगो लत्याइ हिड्यौ हेरिनौ फर्केर,
बेहोसीमा सायद कसम खायेथ्यौ कसैलाई भाकेर !
भैगो नसोध अब मलाई सोधिहेर आफैलाई,
के देख्यौ तिमीले आफुभित्र खोजिहेर आफैंलाई !
निभ्न सकेनन् मुटुका ज्वाला यी आँखाका आँशुले,निको पारेनन् कलेजीका घाउ तिम्रा झूठा कसमले ! * नेपाली मूलकी भारतीय गायिका चन्दा देवीको सुरिलो स्वरमा यो गीत सुन्नका लागि कृपया तलको भीडियोमा क्लिक गर्नु होस् । youtube को यो तलको लिंकबाट पनि सुन्न सक्नु हुनेछ ।
http://www.youtube.com/watch?v=OJpAvRtugY0&feature=related Posted by
LunaDecember 30, 2010 at 1:28 PM--भैगो नसोध अब मलाई सोधिहेर आफैलाई, के देख्यौ तिमीले आफुभित्र खोजिहेर आफैंलाई !---कती मार्मिक ---ReplyDeleteAdd commentLoad more...